प्राचीन सहर टोखा एक परिचय: News Of Tokha
प्राचीन सहर टोखा एक परिचय
शुक्र, पौष १४, २०७४
राजधानी काठमाडौंको मुटु शंकधर पार्क(रत्न पार्क)बाट ९ कि.मी. दुरीमा रहेको यस टोखाको उत्तर तिर झोर महाँकाल गाविस, पूर्वतिर खड्ग भद्रकाली गाविस, दक्षिणतिर गंगबु, धापासी गाविस र पश्चिमतिर फुटुङ्ग गाविस रहेको छ । पहिला एउटा मात्र गाविस रहेको टोखा २०३८ सालमा दुई गाविसमा बिभाजित हुन पुग्यो । तसअर्थ हाल टोखा सरस्वती र चण्डेश्वरी गाविस मिलेर टोखा बनेको छ । जातीय हिसावमा यहाँ नेवार जातीको अधिकतम उपस्थिति छ । यहाँ श्रेष्ठ, डंगोल, मानन्धर, नापीत, कर्माचार्य, कुस्ले, खड्गी, पोडे, जोशी इत्यादी थरका जनताको बसोबास छ । यहाँका सम्पूर्ण मानिसहरु मातृभाषा नेवारीलाई बोलीचालीका लागि उपयोग गर्दछन् । यो गाउँ एउटा ऐतिहासिक राज्य भएको हुनाले थुप्रै साँस्कृतिक रितिरिवाज तथा परम्परा यहाँ विद्यमान छन् ।
ऐतिहासिक पक्ष केलाउने हो भने यो ठाउँ प्राचीन कालमा विकसित र प्रचलित ठाउँ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । वि.सं ५९७ को शिलालेख यहाँ विद्यमान रहनु र अंशुवर्माले बनाएको चण्डेश्वरी मन्दिर र सोको शिलालेख हालसम्म पनि जीवित हुनुले यो ठाउँ इतिहासको कुनै कालखण्डमा तत्कालीन राज्यको केन्द्रविन्दु समेत रहेको संकेत मिल्दछ । मन्दिर, बाजा–गाजा, पाटी–पौवा, चोक, पुरानो ढुङ्गेधारा, इनार–कुवा इत्यादी जस्ता ऐतिहासिक भौतिक पक्षमा यस ठाउँ धनी भएकाले यहाँका पूर्खाहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न थिए भन्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । हालसम्म पनि धेरै चाड पर्वहरु मनाउने परम्परा कायम हुनुले पनि यहाँका पूर्खाहरु मोज मस्तीमा मस्त रहेको र आर्थिक रुपमा सवल रहेको संकेत गर्दछ । पूर्खाको आर्थिक सम्पन्नताको मूल कारण यहाँको मलिलो माटो र घरेलु उत्पादनको सिप नै हुनुपर्छ । कपडा बुन्ने, माटोको भाँडो बनाउने, चाकु उत्पादन गर्ने, सिकर्मी, डकर्मी, बुट्टा भर्ने जस्ता सिपमा यहाँका जनताहरु हालसम्म पनि निपुण छन् । यही आर्थिक सम्पन्नताले गर्दा यहाँका जनताहरुको जागीर–सेवा पेशामा इच्छा जाहेर नभएको हुनसक्छ । यसले गर्दा राज्य सञ्चालन तथा यसका विधिहरुमा यहाँका जनताहरुको हालसम्म पनि पहुँच छैन, यद्यपी यो गाउँ राजधानीबाट आँखे दुरीमा अवस्थित छ ।
विकास निर्माणको हकमा २०१८ सालतिरै यहाँबाट शहरसम्म छिचोल्ने बाटो निर्माण गरिएको थियो । टोखाको आधुनिक विकास–निर्माणको सन्दर्भ खोतल्न खोज्दा वि.सं १९९४ सालको सार्वजनिक धाराहरुको वितरण कार्यलाई अगाडि सार्नुपर्छ । खानेपानी समस्यालाई सरलीकरण गर्न त्यतिबेलै तत्कालीन टोखा नगरमा ९-९ वटा धाराहरु बनाई खानेपानी वितरण गरेका थिए ।
२. भौगोलिक पक्ष
बाग्मती अञ्चलको काठमाडौं जिल्लामा यस टोखा अवस्थित छ । देशकै केन्द्र मानिने शंकधर पार्क (रत्न पार्क)बाट ९ कि.मि. टाढा काठमाडौंको उत्तरी सिमाना शिवपूरी राष्ट्रिय निकुञ्जको काखमा यो अवस्थित छ । २७.४५˚ल्याटिच्युड उत्तरी गोलाद्र्ध र ८५.१९˚लंगिच्युड पूर्वमा अवस्थित यस टोखा समुन्द्री सतहबाट १३४६ मिटर (४४१९ फिट) उचाईमा अवस्थित छ । यस टोखाको मध्य भाग समथर भूभागले बनेको छ भने उत्तरतिर शिवपूरी डाँडा अवस्थित छ र बाँकी तीनै तिरबाट उचाईमा छ । यस टोखाका सिमाना गाविसहरु निम्न छन् ः
उत्तरः झोर महाँकाल गाविस
दक्षिणः धपासी गाविस र गंगबु गाविस
पूर्वः खड्का भद्रकाली गाविस
पश्चिमः फुटुङ्ग र साङ्गला गाविस
बिस्काः जात्रासँगै साँस्कृतिक महोत्सव पनि हुने
शनि, चैत ३, २०७४
शुरु भयो पाहाँ चर्‍हे नखः
शुक्र, चैत २, २०७४
टोखा नगर २ का जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान तथा न्यानो कपडा वितरण
प्राचीन टोखालाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड
बुध, माघ १७, २०७४
प्राचीन सहर टोखाको सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्ष
प्राचीन सहर टोखाको ऐतिहासिक पक्ष
पाहाँ चर्‍हे जात्रा सम्पन्न
पाहाँ चर्‍हे नखः (विशेष)
दुःख र पीडाबाट जन्मिएको संस्था "भिन्न रुपले सक्षममानव स्याहार केन्द्र"
टोखा टाइम्स माघ अंक बुध, माघ १०, २०७४
टोखा शनि, चैत ३, २०७४
टोखा शुक्र, चैत २, २०७४
विज्ञान / प्रविधि मंगल, फागुन २९, २०७४
यूएस बंगला विमान काठमाडौंमा दुर्घटनाग्रस्त , सम्पूर्ण उडान ठप्प
समाचार सोम, फागुन २८, २०७४